Ronaldo oo ka hadlay arinta ku saabsan in Modrić uu ku guuleystay abaal marinta Ballon d’Or 2018 – Gool FM
(Juventus) 10 Dis 2018. Cristiano Ronaldo ayaa ugu dambeyn ka baxay aamusnaanta kadib markii uu ku guuldareestay inuu gacanta ku dhigo abaal marinta xiisaha badan ee Ballon d’Or 2018, taasoo loo caleymo saaray saaxiibkiis horey ee kooxda Real Madrid Luka Modrić.
Ronaldo ayaa ugu hambalyeeyay Luka Modrić inuu ku guuleestay abaal marinta Ballon d’Or 2018, wuxuuna tilmaamay inuu si wanaagsan uu ugu qalmay.
Laakiin Cristiano ayaa dhinaca sheegay in isaga xitaa uu u qalmay inuu ku guuleysto abaal marinta Ballon d’Or, kaliya ma ahan tan sanadkan oo kaliya, balse sanad kasta, sida uu hadalka u dhigay.
“Waxaan u maleynayaa inaan u qalmo inaan ku guuleysto Ballon d’Or sannad walba, waxaan u shaqeeyaa sida aan ugu guuleysan lahaa”.
“Laakiin hadii aanan ku guuleysanin taasi macnaheedu ma ahan in dunida ay dhamaatay, waxaan ixtiraamayaa go’aanka codbixiyeyaasha”.
“Waxaan ku dadaalayaa sida aan ugu qanci lahaa hadii aanan ku guuleysan abaalmarintan, rikoodhada been ma sheegaan, ha moodin inaan faraxsanaan doonin hadii aan ku guuldareysto abaal marintan”
“Miyaad u maleyneysaa in aan guriga u tagayo inaan ooyayo? Waxaan ka niyad jabsanahay inaanan ku guuleysanin abaalmarintan, laakiin noloshu way socotaa waxaanan si adag u shaqeyn doonaa si aan mar labaad ugu guuleysto”.
“Si kastaba ha ahaatee, waan u hambalyeeynayaa Luka Modric, wuxuu u qalmaa inuu ku guuleysto Ballon d ‘Or, laakiin sanadka soo socda waxaan sameyn doonaa wax walba si aan markale manasada u soo koro”.